10 casho ka dib sideebuu mustaqbalka Borama noqon doonaa? | Cadceed newssite
10 casho ka dib sideebuu mustaqbalka Borama noqon doonaa?
Waxa dhici doona bari Allah ayuunbaa og, balse bani-aadamka Allah wuxuu siiyey garaad iyo waxkala garasho dhamaystiran oo ay ku saadaalin karaan mustaqbalkasta, iyagoo ka shiidaal qaadanaya wacyiga markaa jira iyo dhibaatooyinkii ay soo mareen.
Hadii aanu bani-adamku dib u eegin waayihii xumaa ee soo maray, casharna ka baran, markaa xayawaanka duurjoogta ah waxba ma dhaamo. Gundhiga hadalka hadaan gudo galo: waxa jirta in mudo badan Beelaha galbeedka Somaliland ay tabasho iyo mahadhaba ka tirsanayeen xisbiga talada haya ee kulmiye.
Gocashadu markii ay xadhkaha goosatey, waxaanu la wada soconaa in Odaydhameedyada gobolada galbeedka soomaaliland ay waraaq u qoreen xukumada Silaanyo, iyagoo si anshax iyo aqooni ku dheehan tahay uga dalbanaya in saamiqaybsiga gobolada galbeedka dib loo eego!! Taasi waxba lagama soo qaadin xukumada Silaanyana indhaha ayey ka fureysatay.
Quus iyo kaqadhgoosi ayaa lagala kulmay hawshuna waxay isu bisho shubatey “Juuqla”. Mudo badan oo galbeedku Samir la golongolay waxaa dhacday in dherigu karka ka batey furkana tuurey oo ay gaadhay in Suldaan Wabar oo ka mida Salaadiinta galbeedku uu xadhkaha goosto maleeshiyo hubaysana ka dhex abaabulo galbeedka Borama.
Wali xaaladii galbeedka oo cakiran xukumada Silaanyo waxay ku kacday kadaroo dibi dhal kadib markii ay baayacmustarkii iyo haldoorkii Beelaha Suldaankaasi kasoo jeeday ay xabsiyada u taxaabtey iyadoo aan u aabo yeelin khalad- khalad kale lagu saxaayo. Xaaladu waxay circka isusii shareertaba iskeed ayey u dantey marlabaad waxa waxay xaaladu ku danbeysay “Juuqla”
Tariikhda ku dheeraan maayo waayo waa laga wada dharagsan yahaye, waxaan dadweynaha galbeedka xusuusinayaa hal sadar oo ku jirey gabay aan bari hore tiriyey oo magaciisa la yidhaa “Sumad” gabaygaa waxa ku jiray “ Sumada Geela waxa loo sarsarey Suudi iyo dheeha, Waa tiro la sugay yey-dhinaan sidigta laaleyse”. Sumad ayey baryo hore lahaan jireen waxayna ahayd iyadoo sanka laga sarsari jirey si ay isu gartaan. Odayaashii barigaa jirey waxay sidaa u sameeyeen si aan cidina meel kale ugu kicin dadkuna isu duubnaano. Bar isbar-bardhig Odayaashaa barigaa jirey iyo kuwa hadda jira iyo waliba kuwa aqoonta sheeganayaa ee dadka kala irdheeyey kuwamaa aqoontoodu anfac leedahay?
Hadaba umada marka isu duubnidu ka lunto waxa ku dhaca eraygan aan soo celceliyey ee “Juuqla” Marka danbena waxay noqdaan kuwo kala firdhada sida ugaadha duurjoogta ah isna sheegan, talana aan wadaagin. Natiijada danbena waxay noqotaa in ay magac ka dhexeeya iskaba daaye ay qowmiyado kale ku kala darsamaan. Akhristow hadaba ma istidhi dadbaa sidaa ku socda hadii aanu Allah badbaadin iyaguna is dabaqan?
Waxyaabaha aan la anfariiro waxa ka mid dad dhibaato meelwalba ka sheeganaya hadana aan marnaba isweydiinin sidii dhibaatadaa looga bixi lahaa. Min- tuulo ilaa tuulo hadii aad dadka galbeedba waraysato waxay kuu sheegayaan inay khaatiyaan ka joogaan xukumada Kulmiye, hadana waxaad arkaysaa dadkii hogaanka u ahaa oo wax fiican ka sheegaya xukumada Kulmiye. Hadaba ma dadkaa waalan miye kuwa masuulka dadka u ahbaa waalan?
Waxyaabaha dadku ka cabanayaan waxa ka mid ah:
Cashuur madaxa dadka laga qaado oo caalamka ku cusub
Xaalufin hadntida maguurtada ah sida : Kaluunka, Dhulka iyo macdanta
Iyo mid maalba sida daabacaad lacago farabadan si doolar loogu bedesho.
Dadka galbeedku arimahaa qaar waxay la qabaan gobolada kale inta badanse kali ayey u tahay sida macdamaha dhulka ee ajaanibku guranayo iyo xaalufinta khayraadka badda. Iyo waliba ta u daran oo ah cashuurta lawyacado ee madaxaa ha furtada ah.
Hadaba iyadoo sidaa Juuqla lagu jiro hadii Allah keenay faraj dadka u kacay oo ah xisbi magaciisa la yidhaa Wadani oo ay hogaaminayaan dad aqoonleh, una dabacsan dadka danyarta iyo guud ahaan dadkii ku jirey juuqla, waa maxay sababta dadka qaarkii ay wali jiho kale u eegayaan. Soomaalidu waxay tidhaahdaa nin haduu seexdo oo soo tooso waa kii… Kulmiye waa Kulmiye oo waliba waa kulmiye cusub oo lala yaabay!! markaa dadweynaha Borama waxa la gudboon laba arimood oo kala ah:
Ma waxad rabtaan todobo sano oo Juuqla kale aad ku jirtaan ?
Mise rarka iyo heeryada ayaad iska tuuraysaan oo ilmihiina iyo caarkiina ayaad badbaadinaysaan?
Hadii aad doorataan tan danbe, waa gobonimo Allah na waa idinku guulayn doonaa waxaanad wax la qaybsami doontaan dadweynaha Soomaaliland. Hadiise aad wali ku jirtaan qafladii hore ee dhawrka nini idin baayici jireense waa inoo bisha 14keeda iyo 7 sano oo juuqla kale ah.
Maxamuud Cabdillahi Rooble ( Jariskaxuur)